Acetyl-L-Carnitine (အက်စီတိုင်းအဲလ်ကာနီတင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Acetyl-L-Carnitine (အက်စီတိုင်းအဲလ်ကာနီတင်း)
Acetyl-L-Carnitine (အက်စီတိုင်းအဲလ်ကာနီတင်း) ကဘာလဲ။
အက်စီတိုင်းအဲလ်ကာနီတင်း ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Acetyl-L-Carnitine ဟာ ကိုယ်ခန္ဓါအတွင်းမှာ သဘာဝအတိုင်း ထုတ်လုပ်တဲ့ amino acid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို အောက်ပါကျန်းမာရေး အခြေအနေတွေမှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။
အသက်ကြီးခြင်းကြောင့် မှတ်ဉာဏ် ယိုယွင်းခြင်း
အရက် နဲ့ Lyme ရောဂါတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ တွေးတောမှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများ
Down’s syndrome ဒေါင်းရောဂါ
ဆီးချိုကြောင့် အာရုံကြော နာကျင်ခြင်း
AIDS ကုသမှုမှာ အသုံးပြုတဲ့ ဆေးတွေကြောင့် အာရုံကြော နာကျင်ခြင်း
Acetyl-L-Carnitine ကို အခြားအခြေအနေတွေအတွက်လည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ကို ပိုမိုသိရှိဖို့ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Acetyl-L-Carnitine ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လုံလောက်တဲ့ လေ့လာမှုတွေ မရှိသေးပါဘူး။ ပိုမို သိလိုတဲ့ အချက်အလက်တွေ ရှိရင် Herbal ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အချို့လေ့လာမှုတွေက Acetyl-L-Carnitine ဟာ ကိုယ်ခန္ဓါက စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကို ကူညီပေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါဟာ နှလုံး၊ ဦးနှောက် လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုနဲ့ ကိုယ်ခန္ဓါ ဖြစ်စဉ် အတော်များများကို ကူညီပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အက်စီတိုင်းအဲလ်ကာနီတင်း အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Acetyl-L-Carnitine နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဆေးတွေ၊ အခြားဆေးတွေ၊ အခြား herbal တွေနဲ့ မတည့်ရင်။
အက်စီတိုင်းအဲလ်ကာနီတင်း က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
Acetyl-L-Carnitine ဟာ လူကြီးအတော်များများအတွက် စိတ်ချရပါတယ်။
Acetyl-L-Carnitine အသုံးပြုခြင်းကို စီစဉ်ထားတဲ့ ခွဲစိတ်မှုမတိုင်မီ နှစ်ပတ်အနည်းဆုံးကြိုပြီး ရပ်သင့်ပါတယ်။
အက်စီတိုင်းအဲလ်ကာနီတင်း ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
Acetyl-L-Carnitine ကနေ အောက်ပါဆိုးကျိုးတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဆီး၊ ရှူထုတ်သောလေ၊ ချွေးတို့မှ ညှီနံ့ရခြင်း
အက်စီတိုင်းအဲလ်ကာနီတင်း ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
Acetyl-L-Carnitine ဟာ သင်အခုသောက်နေတဲ့ ဆေးတွေ (သို့) ရောဂါအခြေအနေတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါတယ်။ အသုံးမပြုခင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
သွေးခဲခြင်းကို နှေးစေတဲ့ ဆေးတွေဖြစ်တဲ့ Acenocoumarol (Sintrom), Warfarin (Coumadin) တွေဟာ ဒီ Herbal နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါတယ်။
အက်စီတိုင်းအဲလ်ကာနီတင်း အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
Alzheimer’s disease အတွက်
အသုံးပြုသင့်တဲ့ ဆေးပမာဏကတော့ တစ်နေ့ကို ၁၅၀၀-၄၀၀၀ မီလီဂရမ်ဖြစ်ပြီး တစ်နေ့အတွင်း နှစ်ကြိမ် သုံးကြိမ် ခွဲပြီး အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
အသက်ကြီးခြင်းကြောင့် ဖြစ်တဲ့ မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းခြင်းအတွက်
အသုံးပြုသင့်တဲ့ ဆေးပမာဏကတော့ တစ်နေ့ကို ၁၅၀၀-၂၀၀၀ မီလီဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။
အသက်ကြီးသူတွေမှာ ဖြစ်တဲ့ စိတ်ကျခြင်းအတွက်
အသုံးပြုသင့်တဲ့ ဆေးပမာဏကတော့ တစ်နေ့ကို ၁၅၀၀-၃၀၀၀ မီလီဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးပြုသင့်တဲ့ ဆေးပမာဏကတော့ တစ်နေ့ကို Acetyl-L-Carnitine ၁ ဂရမ်နဲ့ L-carnitine ၂ ဂရမ်ပေါင်းအသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နေ့စဉ် ၄၀၀၀ မီလီဂရမ်အသုံးပြုခြင်းဟာ သုက်ပိုးတွေရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာကို တိုးတက်စေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Peyronie’s disease အတွက်
အသုံးပြုသင့်တဲ့ ဆေးပမာဏကတော့ တစ်နေ့ကို ၁ ဂရမ် သုံးလ သောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသက်ကြီးခြင်းကြောင့် ယောက်ျားဟော်မုန်း နည်းခြင်းအတွက်
အသုံးပြုသင့်တဲ့ ဆေးပမာဏကတော့ တစ်နေ့ကို Acetyl-L-Carnitine ၂ ဂရမ်နဲ့ propionyl-L-carnitine ၂ ဂရမ်ပေါင်းအသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆီးချိုကြောင့် အာရုံကြော ထိခိုက်ခြင်းအတွက်
အသုံးပြုသင့်တဲ့ ဆေးပမာဏကတော့ တစ်နေ့ကို ၁၅၀၀-၃၀၀၀ မီလီဂရမ် ခွဲသောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Acetyl-L-Carnitine ကို အသုံးပြုရမယ့် အချိုးအစားက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူနိုင်ပါဘူး။ အသက်အရွယ်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ အခြားအချက်အလက်တွေပေါ်မူတည်ပါတယ်။ Herbal supplements တွေဟာ အမြဲလုံခြုံစိတ်ချရမှု မရှိပါဘူး။ သင့်လျော်တဲ့ အချိုးအစားကို သိရှိနိုင်ဖို့ ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
အက်စီတိုင်းအဲလ်ကာနီတင်း က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
Acetyl-L-Carnitine ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Acetyl-L-Carnitine. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-834-acetyl-l-carnitine.aspx?activeingredientid=834&activeingredientname=acetyl-l-carnitine. Accessed March 11, 2017.
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေတွေကို ဘာလို့ သံဓာတ်အားဆေးသောက်ခိုင်းတာလဲ
ခရီးသွားရင်း တွေ့ကရာစားပြီး အစာအိမ်မထိခိုက်အောင် ကာကွယ်မယ်
သင့်မှာ ဒီကျန်းမာရေးပြဿနာတွေရှိနေရင် ချင်း (ဂျင်း)ကိုမစားသုံးသင့်ပါဘူး
ပြေးတာက သေဆုံးနိုင်ခြေ ၂၇ ရာခိုင်နှုန်းထိ လျှော့ချပေးနိုင်